Mourinho oo ka dhawaajiyay inuu Ibrahimovic kusoo laaban karo Man Utd – Gool FM
Mourinho oo ka dhawaajiyay inuu Ibrahimovic kusoo laaban karo Man Utd
(Manchester) 11 Agoosto 2017 – Waloow lala xiriirinayay AC Milan, Jose Mourinho ayaa sheegay in Zlatan Ibrahimovic uu kusoo noqon karo Manchester United.
Qannaaskan qawaaroobey ayaa haatan xor u ah inuu ku biiro kooxdii uu doono kadib markii uu dhacay qandaraaskiisii United, balse si kastaba ma ciyaari karo haatan maaddaama uu kasoo kabanayo dhaawac gaarey.
Maaddaama uu qandaraaskiisu dhacay wuxuu qandaraaska saxiixi karaa xitaa kaddib marka uu xirmo suuq xagaagu, isagoo sidaa darteed Milan kusoo biiri kara bilaha Oktoobar iyo Nofeembar.
Yeelkeede, macallinka kooxda Utd ayaa sheegay inuu Ibra kusoo laaban karo Old Trafford fasalkiisii 2-aad. “Waa dhaawac, u baahan waqti uu kusoo kabto, deg deg ma aha, balse waxaan ka wada xaajoonaynaa inuu nala qaato qaybta 2-aad ee fasalkiisii 2-aad.” ayuu yiri Mourinho.
GOOGOOSKA: Arsenal vs Leicester City 4-3 (Kulan-bilowga EPL oo 7 la iska dhaliyay)